AdSense: Esi Wepụ Mpaghara site na Mgbasa ozi Mgbakwunye | Martech Zone
O doro anya na onye ọ bụla na-eleta saịtị m anaghị achọpụta na m na-akwado saịtị ahụ na Google Adsense. Echetara m oge izizi m nụrụ ka akọwawara Adsense, onye ahụ kwuru na ọ bụ Ọdịmma webmaster. M na-ekwenyekarị, ọ naghị ekpuchi ụgwọ m na-akwụ. Agbanyeghị, enwere m ekele na iwepụ ọnụahịa saịtị m yana Adsense bụ ebumnuche mara mma na usoro ha na mgbasa ozi dị mkpa.
Nke ahụ kwuru, obere oge m gbanwere ntọala Adsense m site na iwepu mpaghara niile dị na saịtị m yana, kama, na-enyere Adsense aka ịkwalite ebe ọ debere mgbasa ozi.
Ahapụrụ m Adsense na-ebuli ntinye ego maka ọnwa ole na ole wee hụ obere mgbago na ego m na-enweta kwa ọnwa. Otú ọ dị, nnukwu ọkọlọtọ nke Google debere n'elu ihe ndozi ihe osise m bu ihe ojoo:
N'adịghị n'ihe ị nwere ike iche, Nchekwa onwe na-enye gị ohere ijikwa mpaghara na ọnụ ọgụgụ nke mgbasa ozi Google tinye na saịtị gị. Ọ bụrụ nbanye Google Adsense, họrọ Mgbasa ozi> Isi:
N'aka aka nri, enwere bọtịnụ edezi na mbipụta gị. Mgbe ịpịrị bọtịnụ ahụ, ibe ahụ ga-emepe ma desktọọpụ na nsụgharị mobile nke saịtị gị ebe ị nwere ike ịhụ ebe Google na-etinye mgbasa ozi gị. Ma, nke kachasị, ị nwere ike wepu mpaghara ahụ kpamkpam. Emere m nke a site na ọkọlọtọ isi isi na-asọ oyi nke na-ewere saịtị m niile.
Ọ bụ ezie na ọkọlọtọ ahụ nwere ike ịpịkwuo ego na-enweta ego, ọ jọgburu onwe ya maka ahụmịhe onye ọrụ m ma mee m ka m dị ka onye na-achọ spam na-anwa ịba ego. Ewepụrụ m mpaghara ahụ.
Emekwara m jụ ọnụọgụ mgbasa ozi opekempe na ibe ọ bụla na 4. can nwere ike ịchọta nke ahụ na ngalaba Ad Adad n'akụkụ aka nri na n'akụkụ. 4 bụ opekata mpe ha nyere gị ohere ịhọrọ.
Enwere nhọrọ ndị ọzọ ị nwere ike ịkwalite ma gbanyụọ na saịtị gị, gụnyere mgbasa ozi dị na peeji nke, ọdịnaya jikọtara, mgbasa ozi arịlịka, na mgbasa ozi vignette bụ mgbasa ozi ihuenyo zuru oke nke na-egosi n'etiti ibu peeji.
Dịka onye nkwusa na-enye ọtụtụ nyocha na ozi n'efu, enwere olile anya na ị naghị eche na m na-etinye saịtị m. N'otu oge, achọghị m ịkpasu ndị mmadụ iwe ma gbochie ha ịlaghachi!
Tags: akpaaka mgbasa oziGoogle AdSenseotúmonetize akwụkwọkwụọ ụgwọ kwa Pịawepu ebe
Adzooma: Jikwaa ma bulie Google, Microsoft, na Facebook Ads In One Platform